Kee eriri oche ma ọ bụ teepu ọwa: Ngwa nchekwa nchekwa ụgbọ elu ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kee eriri oche ma ọ bụ teepu ọwa: Ngwa nchekwa nchekwa ụgbọ elu ọhụrụ
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mepee duct: Ngwa nchekwa nchekwa ụgbọ elu ọhụrụ
Ọtụtụ mgbe, ndị na -anya ụgbọ elu na -eji teepu na -emerụ ndị njem ụgbọ elu na -adịghị eme isi ike. Gịnịkwa kpatara ya? Ọ siri ike, echekwabara, ọ bụ ya mere nne maara ihe nke ọgbara ọhụrụ ji gwa ụmụ ya: “Teepu duct. Ahapụla n'ụlọ na -enweghị ya. ”
Teepu duct apụla dị ka ebe a na-aga maka nchekwa ụgbọ elu ebe ọ dị oke mkpa ka ejide onye njem.
Nanị n'ime ọnwa gara aga naanị, opekata mpe ihe onyonyo abụọ mere ka ekwesịrị iji teepu duct iji mee ka ndị njem na-enweghị nchịkwa nọrọ n'oche ha.
Enwere ike nwee ihe ngosi maka ihe omimi nke iji teepu duct na nso nso a n'ụgbọ elu ndị njem.
Ndị ụgbọ elu America kọrọ n'izu a na Tuesday na ihe dị ka otu awa mgbe ọ kwụsịrị n'ụgbọ elu si Maui gaa Los Angeles, a ga-atụgharị ụgbọ elu ahụ na Honolulu mgbe nwatakịrị nwoke dị afọ 13 ghọrọ ọgba aghara.
Ndị akaebe kwuru na nwata nwoke ahụ nwara ịkụpụ windo n'akụkụ oche ya, ya na nne ya wee bụrụ anụ ahụ. Esemokwu malitere ịrị elu ihe dị ka otu awa n'ime ụgbọ elu ahụ, na -eme ka onye na -anya ụgbọelu tụgharịa ụgbọelu ahụ.
Ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na ejiri ihe mgbochi iji gbochie nwa nwoke ahụ, mana vidiyo gosikwara ka onye na -eje ozi ụgbọ elu na -adọkpụ ya n'oche ya.
Ụgbọ elu ahụ rutere n'udo, a na -etinye ndị njem n'ụgbọ elu ndị ọzọ ma ọ bụ nye ha ụlọ nkwari akụ.
Mepee Duct: Ụkpụrụ Nchedo Ọgbọ Ọhụrụ
N'ụzọ ụfọdụ, teepu duct apụla dị ka ebe a na-aga maka nchekwa ụgbọ elu ebe ọ dị oke mkpa ka ejide onye njem maka nchekwa nke mkpụrụ obi ọ bụla nọ n'ụgbọ. Ọ naghị efu ihe ọ bụla, a na -echekwa ya nke ọma n'ụgbọ n'ebughị ohere ọ bụla dị oke mkpa, ọ dịkwa ike. Ike siri ike idobe mmadụ - ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nọrọ jụụ - n'oge oge ụgbọ elu fọdụrụnụ.
N'ihe nkiri na -atọ ọchị, na ihe nkiri Sister Act 2, otu n'ime ụmụ akwụkwọ asọmpi asọmpi, Frankie, na -egosi Nwanne nwanyị Mary Patrick uwe mwụda ya na -enweghị eriri wee sị, “Ihe a dọwara! Ugbu a, gịnị ka m kwesịrị ime, huh? ” Nwanna Nwaanyị Mary Patrick ji nwayọ zaa, sị: “Gee ntị, ewela iwe. Nne m na -ekwubu na ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume ma ọ bụrụhaala na i jiri obere okwukwe na nnukwu mpịakọta teepu eletrik. ” Mgbe ahụ ọ na -apịpụta teepu ọwa ọlaọcha site na omume ya wee dọpụta nnukwu teepu ka ọ na -asị, "Ndewo!"
Ihe mberede teepu ọwa
Ka anyị leghachi anya azụ n'ihe ole na ole kacha ọhụrụ mere n'etiti ikuku nke kwụsịrị n'enweghị nsogbu na ihe kpatara ya mpịakọta anwansi nke teepu ọla ọcha.
Na Julaị 12, otu nwanyị nọ n'ụgbọ elu ụgbọ elu ndị America si na Dallas-Fort Worth ruo Charlotte bu ụzọ teepu teepu na nkwojiaka na ụkwụ wee mesịa nọrọ n'oche ya, mgbe nke ahụ ezughị iji merie ya. ọ nwara imepe ụzọ n'ụgbọelu ahụ maka na ọ chọghị ka ọ gbagoo ọzọ. Ndị na -ahụ maka ụgbọ elu otu n'ime ya bụkwa nke a tara gbara ya ume ka ọ chekwaa nchekwa nke ndị njem 190 nọ n'ụgbọ ahụ.
Na August 3, a kọrọ na Maxwell Berry, onye Ohio dị afọ 22, boro ebubo zoro ara nke ndị na -eje ozi ụgbọ elu 2 n'oge ụgbọ elu Frontier Airlines wee tụọ otu ụzọ n'ụzọ atọ. Ndị na-eje ozi ụgbọ elu duct ya ka ọ nọrọ n'oche ya maka njem fọdụrụ na Philadelphia na Miami. Ndị uwe ojii jidere Berry mgbe ọ rutere na batrị atọ. Ndị ọrụ FBI nọ ebe ahụ kwuru na ha agaghị agbachitere ebubo mpụ nke gọọmentị etiti.
Dị ka Frontier si kwuo, ndị na -eje ozi ụgbọ elu ga -eche nsonaazụ nke ha, n'agbanyeghị na o dochaghị anya ihe. Ndị ọrụ ụgbọ elu niile ga -ekwu n'oge ahụ bụ: "Ndị na -ahụ maka ụgbọ elu ga -abụrịrị, dị ka achọrọ na ọnọdụ ndị dị otú ahụ, na -eche ka emechaa nyocha."
Ihe ngosi maka mmalite nke ihe omimi teepu duct
Association of Attendants-CWA, nke na-anọchite anya ndị na-ahụ maka ụgbọ elu Frontier, ji obi ha niile kwado ihe ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ mere. Onye isi otu ahụ, Sara Nelson, kwuru na "a manyere ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ka ha gbochie onye njem ahụ ngwaọrụ dị ha n'ụgbọ."
Dịka otu ahụ siri kwuo, ụlọ ọrụ ụgbọ elu na -enye ndị ọrụ ụgbọ mmiri teepu ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa igbochi onye njem. Frontier azaghị ajụjụ gbasara nke ahụ.
Dabere na prọfesọ nke njikwa ụgbọ elu na Mahadum Metropolitan State Denver, Jeff Price, "ọ bụ ihe a na -ahụkarị iji teepu duct iji chebe onye na -anọchite anya ihe iyi egwu ụgbọ elu ma ọ bụ ndị ọzọ." Ọ kọwara na ụfọdụ ụgbọ elu nwere ihe mgbochi ndị ọzọ n'ụgbọ, dị ka ịgbatị aka, wee kwuo na ọ na -ebu ma mgbe ọ na -efe "maka oge dị otu a."
Yabụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ụfọdụ ụgbọ elu ejirila nwayọ 'wụnye' mpịakọta teepu duct n'ime ngwa ọrụ ụgbọ elu ha iji nọrọ jụụ na nchekwa n'okpuru njikwa mgbe kilomita 36,000 gbagoro. M ga -enyo enyo na ọ bụghị ọtụtụ, ndị njem ga -ajụ nke ahụ.